Roma Oo Ka Qeylisay Qiimaha Uu Ku Fadhiyo Tikidka Kulanka Ay Barca Ku Wajahayso UCL - Waa Imisa? %
Wargeyska reer Italy, laakiin ay maalgeliso AS Roma, ee lagu magacaabo Il Romanista ayaa wuxuu war-qad furan uu usoo qoray Madaxweynaha Barcelona, ninka lagu magacaabo Josep Maria Bartomeu, taasoo ku saabsan qiimaha Tikitka kulankooda Champions League.
Roma, oo kooxda Barcelona, ku aaday isku aadka wareega Sideed dhamaadka Champions League, laakiin qiimaha tikidka ayaa wuxuu yahay mid aad qaali u ah, marka lugta koowaad lagu dheelayo garoonka weyn ee Camp Nou.
Aduun dhan 90 Milyan oo Yuuroo ayuu ku kacayaa hal xabo ooTikidka, taasoo taageerayaasha uga dhigan wax aysan awood badan u lahayn inay iska bixiyaan, marka laga reebo kuwa nolasha kaga jira dabaqadda sare.
“Gacaliye Barcelona, waxaan kusoo qorayaa wax ku saabsan Champions League,” ayaa lagu bilaabay warqada uu ku daabacneed luqada Gobolka Catalonia looga hadlo.
“Saacado kadib isku aadka, qiimaha diyaaradda laga soo bilaabo Roma ilaa iyo Barcelona, kuwaasoo dab ahaantii aad ujaban, sidoo kale qiimaha hoteelada.
“Marka laga soo tago cadadkaas, qoyskiiba waxaa ku kacaysa 180, 270 ama 260 oo Yuuroo si uu ugu fariisto kursiga ugu sareeya Camp Nou.
“Waa inaad fahantaa arrintaan, taageerida koox kubada cagta ah waxay tahay mid raaxo badan ay keenan taageerayaasha, kuwaasoo lagama maarmaan ah.
Marka la eego magaca Blaugrana ay caanka ka noqotay naadiga, warqadda ayaa sidoo kale ugu baaqday inay caddeeyaan sababta kiiskaas.
“Isku qaata inay ka badan tihiin hal koox, waxaan aaminsanahay oo aan ku kalsoonahay, misana aan rajeynayaa inaad tix-gelin doontaa codsigeena,” ayuu la raaciyay.
“Waxay noqon doontaa tallaabada ugu fiican ee la sameyn karo sababtoo ah kubada cagta waa sida xoriyada, waxaana dooneynaa in dadka ay ka qeyb qaataan, haddii kale waxa laga yaabaa inay guul darreystaan,” ayuu lagu soo gaba gabeeyay.
Barcelona vs RomaChampions LeagueUCL
Kooxda kubada Cagta ee Heegan FC ayaa guul weyn ka gaartay kooxda Waxool